AmaNgqina KaYehova EYurophu
Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo—2017
Iimbalasane Zonyaka Odlulileyo
Ukuwubeka Kwindawo Yokuqala Umsebenzi Wokushumayela Owenziwa Ehlabathini Lonke
“Abekho Abamelwane Abanjengani”
Intlanganiso Entsha Yobomi BamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela
IJW Broadcasting ‘Iyasomeleza Ize Isihlaziye!’
Ingxelo Yezomthetho Ka-2016
Amagqabantshintshi—Iindaba Ezivela Ehlabathini Lonke
Ukushumayela Nokufundisa Ehlabathini Lonke
EAsia NakuMbindi Mpuma
Abantu Bokuqala Ukufuna Inyaniso
Iintlanganiso Zinceda Bonke Bakhule Elukholweni
Ukulindela Ulwalathiso LukaYehova
“KuThixo Zonke Izinto Zinako Ukwenzeka”
“UThixo Wakhulisa.”​—1 Kor. 3:6.
Abadala Baqeqesha Abanye
Umyeni Wam Wayengayibeki Phantsi!
Beniphi Kude Kube Ngoku?
Ndandivakalelwa Kukuba Ndiphumelele
Uthando LwamaKristu Okwenene Aluze Lutshitshe
Ndazibonela Ngawam Amehlo Oko Kuthethwa YiBhayibhile!
Iintsikelelo “Ngexesha Elilungileyo Nangexesha Lenkathazo.”​—2 Tim. 4:2.
Abazange Boyike Ngokoyikiswa
“Lilo Elo Ilifa Labakhonzi BakaYehova.”​—Isa. 54:17.
Bamkhumbula UMdali Wabo Ozukileyo
AmaKurd Amkela Inyaniso
Uthando Lugqitha Ngaphaya Kwemida Yabantu
Kwiminyaka Elikhulu Edlulileyo Ngo-1917
Ingxelo Yonyaka Wenkonzo Ka-2016 YamaNgqina KaYehova Ehlabathini Lonke
Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2017
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOssetia IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
ABEMI 744 482 011
ABAVAKALISI 1 611 290
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 834 121
EGeorgia, kwafika indoda kwitroli yeencwadi seyithethela phezulu isithi: “Soze ndinivumele nishumayele apha! IGeorgia lilizwe lamaOthodoki.” Ezolile, umzalwana owayekuloo troli wayibuza ukuba yakhe yazifunda na iincwadi zethu. Yathi, “Hayi.” Lo mzalwana wathi ucela ikhe izifunde. Emva koko yazola, yaza yathatha iincwadi. Emva kweentsuku ezithile yabuya ize kucela uxolo ngento eyenzileyo. Yathi izifundile iimagazini zethu, yazifundela nomama wayo ongaboniyo. Bazithande kakhulu kangangokuba ifuna ezinye. Ngoku iza qho kwitroli ifuna iimagazini ezintsha.
Eyona Ndlela Yokulungisa Ingxaki
Ngoxa babeshumayela eAzerbaijan, abazalwana ababini bathetha nomfana owayemi phambi kwesinye isakhiwo. Lo mfana wathi, “Ukuba ndiyanimamela, ndakube ndiyona.” Wathi rhuthu imela kwipokotho engasemva, wathi, “Kukho umntu ongandiphathanga kakuhle, ngoku ndiyokulungisa loo ngxaki ngale mela.”
Abazalwana bothuka, kodwa bathi, “Kusisono ukubulala.”
Lo mfana wathi, “Ndithini ke?” Bamfundela amaRoma 12:17-21 baza bamxelela ukuba impindezelo yekaThixo, thina asimele ‘soyiswe bububi, kodwa simele sihlale siboyisa ububi ngokulungileyo.’ Bamxelela ngendlela ekuluncedo ngayo ukuyithetha kakuhle into nomntu, baza bathi ukuba wenzakalise umntu okanye wambulala, akasoze onwabe ubomi bakhe bonke. Wayibona iyeyona ndlela yokulungisa le ngxaki leyo, waza wabashiya.
Emva kweyure, lo mfana waphinda wadibana naba bazalwana, wathi: “Ndivela kula mntu bendifuna ukumbulala. Andimenzanga nto, kodwa siyilungisile ingxaki. Ndiyanibulela ngokundinqanda kwingxaki endiphantse ndazifaka kuyo.” La maNgqina amcacisela ukuba nguYehova omncedileyo.
Iitroli Zeencwadi Zitsala Udade Opholileyo
Kwiminyaka edlulileyo, omnye udade waseNorway wayishiya inyaniso. Emva kokuba kuqaliswe ukushumayela ngeetroli ezidolophini, wayesoloko edlula kwenye yazo xa esiya ezivenkileni.
Nangona engazange aye kuthetha namaNgqina akwiitroli, wabona amaphepha anemixholo ebangel’ umdla yeMboniselo noVukani! kunye neencwadi ezinomtsalane. Le nto yamenza wafuna ukubuyela kuYehova nabantu bakhe. Wayekhuthazwa nayindlela awayenobuhlobo ngayo amaNgqina akwezi troli nendlela awayenesidima ngayo.
Wabona no-jw.org oyiwebhsayithi yethu waza wangena kule webhsayithi. Wavuya kakhulu akubona indlela efumaneka lula ngayo iadresi yeHolo YoBukumkani ekufutshane kunye namaxesha eentlanganiso. Wadawunlowuda ezinye iincwadi waza wanomdla wokuya eholweni. Wamkelwa ngobubele baza abadala bacela omnye woodade ukuba amqhubele isifundo. Wakhawuleza wafumana abahlobo ebandleni waza wabuyela entlanganweni. Uhlala ekho ezintlanganisweni nasentsimini yaye uvuyiswa kukuba ephinde wasondela kuYehova.
Ushumayeza Abantwana Afunda Nabo
Kwibhasi yabantwana besikolo eNorway, uRonja oneminyaka eyi-15 wayexoxa nabafana abathathu afunda nabo ngombandela wokuzivelela kwezinto. Aba bafana babengazihloniphi tu izinto azikholelwayo, ibe yamkhathaza loo nto. Ngenxa yokuba wayengazithembanga ukuba angabenza baqonde ukuba zonke izinto zadalwa, wacela umama wakhe amncede ambonise indlela angabenza bakholelwe ngayo kuMdali.
ENorway: URonja umela iinkolelo zakhe
Ngosuku olulandelayo, kwibhasi yabantwana besikolo, uRonja wasebenzisa amacebiso awanikwe ngumama wakhe xa wayexoxa naba bafana. Sekunjalo, basuka bagculela indlela awayekholelwa ngayo kuYehova. Omnye wabo wakhwaza esithi: “Kule bhasi, akukho mntu ukholelwa kuYehova! Ndicela baphakamise izandla abakholelwa ekubeni izinto zazivelela nabakholelwa kuYehova.” URonja wamangaliswa ngumfanyana owayehleli kufutshane naye owaphakamisa isandla wathi, “Mna ndiyakholelwa kuYehova!” Nabanye abantwana ababini bathi, “Nam!” Incoko kaRonja kunye naba bafana yaviwa nangabanye abantwana besikolo, abanye kubo bazikholelwa izinto awayezithetha!
Indoda Engakwaziyo Ukufunda Ifumana Incwadi
Ngenye imvakwemini amadoda amabini aseSiriya athetha isiArabhu aya kwiofisi yesebe eDenmark. Afika axelela oodade ababekwigumbi lokwamkela iindwendwe ukuba akhangela amaNgqina KaYehova. Avuya kakhulu la madoda akuxelelwa ukuba afikile apho ebesiya khona. Ayifumana njani le ndawo? Abonisa abantu abasebenza kwilayibrari yasekuhlaleni ifoto eyayisefowunini yawo. Lo mfanekiso wawungowephepha lesibini lencwadi yesiArabhu ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Aba bantu babona iadresi yeofisi yesebe baza bawabonisa.
La madoda mabini ayengakwazi kakuhle ukuthetha ulwimi lwaseDenmark. Oodade ababekwigumbi lokwamkela iindwendwe babiza umzalwana othetha isiArabhu. Kwacaca ukuba omnye wala madoda unomdla wokufunda izinto ezininzi eziseBhayibhileni. Lo mzalwana wathatha iadresi nenombolo yefowuni yale ndoda waza wathembisa ukuba baza kubonana kungekudala. Waya kuyo nomnye umzalwana othetha isiArabhu.
Ukufika kwabo kwikhaya lale ndoda, bafumanisa ukuba ayizange idibane namaNgqina KaYehova. Yabaxelela ukuba incwadi iyifumene kwibhokisi yeeleta zayo, nangona ibingenanto echazayo ukuba yekabani. Ngenxa yokuba yona yayingakwazi ukufunda, yacela omnye umhlobo wayo ukuba ayifundele, baza bayigqiba ngeentsuku ezintathu. Into eyayivayo yayenza yaqiniseka ukuba iyifumene inyaniso.
Le ndoda yayikhathazwa kukuba yayihlala kude nentsapho yayo, iyimbacu, kodwa iBhayibhile yayithuthuzela. Xa babeqala ukuya kuyo abazalwana yababuza: “Benikade nihleli phi? Le yeyona nto bendiyifuna.” Isafundelwa ngabazalwana ibe iyithanda kakhulu into eyifundayo.
Wayengazi Kwanto, Ngoku Wonwabile
UDmitry wayengumphathi kwinkampani eyenza icuba eUkraine, kodwa wathi akuqonda ukuba icuba liyabagulisa abantu, wawuyeka loo msebenzi. Kwiinyanga ezintathu ewuyekile, waswelekelwa ngumama nomkhwekazi wakhe. Le nto yamthez’ amandla. Wayenethemba lokuba uza kuthuthuzelwa ecaweni yakhe kuze kuphendulwe imibuzo anayo, kodwa zange yenzeke loo nto. Omnye umhlobo wakhe wathi ukuba ngumOthodoki “kukujingisa nje umnqamlezo entanyeni kodwa kungekho nto uyaziyo.” Kwakunjalo kanye kuDmitry. Wazibona ukuba akazi nto ngoThixo nangeBhayibhile. Engasenathemba, wathandazela uncedo. Wakhumbula ukuba wakha weva kuthethwa ngamaNgqina KaYehova. Wafumana iwebhsayithi yethu kwi-intanethi. Wayithanda kakhulu inkcazelo yeBhayibhile awayifumana kuyo. Emva koko, wakhangela iHolo YoBukumkani ekufutshane. Xa efika kwindawo yokupaka iimoto, wamkelwa ngumlindi waza wambuza ukuba angamnceda ngantoni. UDmitry wathi, “Ndifuna ukufundiswa iBhayibhile.” Ngoku sele eneenyanga ezintandathu efundiswa iBhayibhile ibe uya qho kwiintlanganiso kwaye uyagqabaza.
Babuyela Kubantu Abanomdla Ngokushiya Umyalezo
UPaul noFaith abahlala eBritani, bayithanda indlela abancokola ngayo nelinye ibhinqa elinguSusan, baza balithembisa ukuba baza kubuya. Xa bebuya, eli bhinqa lalingekho. Basebenzisa icebiso lokushiya umyalezo elikuBulungiseleli Bethu BoBumkani bukaNovemba 2014, bashiya umyalezo emnyango othi baza kubuya ngosuku olulandelayo. Xa bebuya, bamangaliswa kukufumana umyalezo obhalelwe bona emnyango. USusan wayebaxelela ukuba kuye kwafuneka ayokuthenga izinto zomtshato wentombi yakhe. Nabo bashiya umyalezo othi baza kuphinda babuye kwiveki ezayo. Bafika uSusan ebalindile, baza baqalisa isifundo seBhayibhile kwincwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile.
EBritani: UPaul noFaith bashiya umyalezo
Ngenxa yokuba intombi yakhe yayisele iza kutshata, uSusan wacela ukuba bangabuyi ngexesha ababegqibe ngalo, kodwa babuye kwenye iveki. Xa bebuya, wayengekho, ngoko bashiya umyalezo kunye nenombolo yefowuni. Bakuvuyela ukufumana iSMS evela kuye ecela uxolo esithi ebencokola nommelwane egadini. Ukususela ngoko, uye wafunda nabo qho iBhayibhile, ibe ngoku usandul’ ukuqalisa ukuya ezintlanganweni.
UPaul noFaith bakukhuthalele ukushiya imiyalezo ukuze bakwazi ukubuyela ebantwini. “Siye sabuyela kubantu abaninzi ebesibashiyele imiyalezo. Ukushiya imiyalezo kusisebenzela kakhulu!”
Ukholo Lwakhe Lwanceda Umongikazi Wakhe
NgoAgasti 2014, omnye umzalwana wayelaliswe esibhedlele eHungary ngenxa yehlwili elixabe emiphungeni, sigulo eso esibizwa ngokuba yipulmonary embolism. Okubuhlungu kukuba, zange aphile ixesha elide. Ethetha ngomongikazi uTünde, owayemnceda kakhulu umyeni wakhe, umfazi walo mzalwana wabhala wathi:
“Ehlotyeni ngo-2015, mna nonyana wam saya kwiNdibano Yengingqi enomxholo othi ‘Yiba NjengoYesu!’ Ukuphuma kwendibano yosuku lwesithathu, xa sasisiya emotweni, elinye ibhinqa lema phambi kwam, lalahla phantsi iibhegi, landanga laza lalila. Ngula mongikazi wayesonga umyeni wam kwigumbi labagula kakhulu kwisithuba esingangeenyanga eziyi-12 ezidlulileyo. Wathi qho xa kuza kuqala umsebenzi, umongikazi ngamnye unikwa isigulana aza kusonga. Qho yena wayethandazela ukuba anikwe umyeni wam. Kwakusenzeka loo nto kanye amaxesha amaninzi!
“Lo mongikazi uthi indlela awayebambelele ngayo umyeni wam kukholo lwakhe nendlela awayethetha ngayo ngethemba analo, ezo zinto zamenza waqonda ukuba kufuneka afunde iBhayibhile namaNgqina KaYehova.
“UTünde, ofunda iBhayibhile ngoku, ukhangele phambili kwixesha laxa esamkela umyeni wam xa evuka emangcwabeni. Ufuna ukumxelela ukuba ukuze amazi uYehova nezithembiso zakhe ezimangalisayo, wancedwa yindlela awayeziphethe ngayo nokholo lwakhe.”
EBulgaria: Bashumayela kubaqhubi beelori emdeni
Ngenxa yetoyitoyi nokuvalwa kweendlela, eminye imida ephakathi kweGrisi neBulgaria yayivalwa ngamanye amaxesha. Ngaloo maxesha, iimoto ezininzi kakhulu zazisiba lukrozo zilindile. Ibandla laseBulgaria elikufutshane, lasebenzisa loo mathuba linika abo bantu balindileyo iincwadi ezithetha ngeBhayibhile. Abazalwana babesiya kuloo mida bephethe iincwadi zeelwimi eziyi-12. Abaqhubi beelori abaninzi babediniwe futhi bekruqukile, ngoko babefuna ukuncokola. Abazalwana babebaphulaphula, bebanika ithemba yaye bebakhuthaza. Omnye umqhubi wabuza, “NingamaNgqina KaYehova?” Bathi bakuthi ewe, wathi, “Ndiyiqondile, kuba ngamaNgqina KaYehova kuphela anokushumayela ngale ndlela nishumayela ngayo.” Umqhubi welori esuka eAustria ebuhlekisa wathi: “Nikho nalapha! Halala! Qhubekani nithuthuzela abantu futhi nibanika ithemba.” Omnye wathi: “Zange ndibe nomdla wokufunda iincwadi zenu. Kodwa ngoku ndiza kuzifunda ngomdla omkhulu.” Xa umzalwana wayeshumayeza omnye umqhubi, zehla iinyembezi kuloo mqhubi. Wathi kwiminyaka emininzi edlulileyo wayeliNgqina. Abazalwana bamkhuthaza besithi aze angapheleli nje ekufundeni iincwadi abamnika zona, kodwa aze aye ebandleni.